ulwazi pa esebenzayo eziqokelelweyo usebenzisa P-WORLD
トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ ulwazi pa esebenzayo eziqokelelweyo usebenzisa P-WORLD
Ulungile pa, ndicinga ezininzi labantu abasebenzisa p-ihlabathi. A site free, ukuze nabani na zingajongwa ngokulula, kuba kukuqokelela iinkcukacha iye site ufunwayo.
In p-ihlabathi, ukuba khosi ulwazi of pa parlour iinkcukacha kunye neendlela ezintsha elizweni jikelele, ulwazi kushishino kunye Xintai kunye nokususwa noluhlu table, njalo-njalo, kuza iinkcukacha ezahlukeneyo ithunyelwa. Ngoko ke p-hlabathi a iziza ezaziwayo-kakuhle ukuba nayo isiKhangeli amagosa kushishino pa, nesendlu pa ezibhaliswe kule sayithi, ndicinga ukuba kukho kwakhona malunga-80%.
kwakhona kulo lonke edumileyo, le site ulwazi pa, sifuna ukuba bajonge indlela yokusebenzisa ngobuchule. p-wonke, ngaphandle kokuya kwi elibe fans, iziganeko iivenkile kunye nolwazi Xintai okanye, imodeli ufakelo, njalo njalo, kunokuba lula kuqokelela zonke iinkcukacha okuvela nesendlu pa.
Ingakumbi, le nokubeka etafileni zokuthuthwa Xintai, kuba iinkcukacha akafumaneki kwezinye, Xintai, ezifana ukuthandwa zeetshekhi iyakwazi ukuqokelela ulwazi kwangaphambili. Ukongeza, iinkcukacha Imboni ulwazi p-hlabathi ekhethekileyo.
apho kumenzi ntoni imifuziselo yekhompyutha, ezifana nokuba ngokusebenzisa uvavanyo, ngokuqokelela ulwazi ngaphambili, unako kwakhona ukuqikelelwa ixesha ukuqaliswa Xintai. Kunye nolwazi imodeli ye-p-hlabathi, de itafile wasebenzisa imodeli entsha, sinako ukukhangela nayiphi na umfuziselo, kuba nayo inxulumene website kumenzi, unako lula ukuqokelela model ulwazi oluthe vetshe.
ezinjalo, oko alawulwa ukujonga ukuba iinkcukacha ezizodwa kwisiza elinye kolu shishino, uyakwazi ukuqokelela ingcaciso engaphezulu zeposi.
kunye, kungcono ukuthatha eli thuba lalo sayithi, ndicinga ukuba lixesha lokuba nihambe ukudlala. Ukuba uya zahlasela slingshot, kufuneka abe venkile kuqala ukukhetha. Ngelo xesha, ukuba pa parlour luncedo kakhulu lolwazi kwilizwe liphela. Xa isigqibo kummandla apho ndiya kuhamba
, khangela kuqala Indawo ufuna imodeli kunye neziganeko ulwazi, lifakwe. Ngokujonga imodeli ufakelo, yintoni ikhompyutha imizekelo imifuziselo iibhodi, nokuba wabeka ekhoyo nakwiyiphi na specs yi Matasupekku khangela, kwakhona, ukusuka imodeli ufakelo iinkcukacha, akukho pa Waba nkqu evenkileni, ungenza pa parlour yereyithi ngentlawulelo izofika elithile.
nolwazi isiganeko iya kuqhubeka ukukhangela nobushushu imodeli siganeko kunye neziganeko. Enyanisweni nayiphi na iqondo uhlengahlengiso iinzipho, koko uhlobo umoya le, andazi ukuba aye elibe fans okunene, kodwa, ngokuya ukuqokelela ubuncinane lolwazi, imodeli okhethiweyo uba egudileyo, kodwa yomnika indleko yexesha akuyomfuneko ukuba ibe nguwe.
ukuguqulwa ratio Ngu ulaziyo, ngokwamandla abo, ukuba ukudlala ngayo kuphela uhlobo lomcimbi, lijolise liya kuba nako kwakhona ukuba kugqitywe phambi kokuba imodeli. Ngale ndlela, akukho inkunkuma kunye nokusetyenziswa ngempumelelo iinkcukacha p-ihlabathi, ungafuna kwakhona ukuba uzama ukuthumela ubomi pa.